आजको राशिफल २०७८ श्रावण २ गते शनिबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ श्रावण २ गते शनिबार
साउन २, २०७८ ०६:४८ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल श्रावण २ गते शनिबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ जुलाई १७ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढशुक्लपक्षको अष्टमी तिथि रात्रि १२ः०२ बजेसम्म, त्यसपछि नवमी रहनेछ ।
मेष – मिहिनेतको उचित कदर हुनेछ । आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा नयाँ लगानिको अवसर मिल्नेछ । नेतृत्वदायी कार्यको जिम्मेवारी पाइनेछ । दाम्पत्य सहयोगले महत्वपूर्ण कार्य बन्नेछ । प्रीयजनसँगको रमाइलो पल वित्नेछ ।
वृष – अपरिचित व्यक्तिको साथ पाइनेछ । अरु दिन विरोध गर्नेहरु पनि सहमतिमा आउने छन् । व्यवसाय फस्टाउने छ । अघिदेखि उठ्न बाँकी रकमलाई पहल गर्दा उठाउन सकिनेछ । स्वास्थ्यको भने ख्याल राख्नु होला ।
मिथुन – मध्यान्ह अघि झन्झटको सामना गर्नुपरेता पनि मध्यान्ह पछिको समयमा सकारात्मक सोच विचारको उदय हुनेछ । काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । अध्ययनमा रुचि जाग्नेछ । अधुरा कार्यलाई अघि बढाउन सकिनेछ ।
कर्कट – दिनको पूर्वार्धकाे समयमा मित्र मिलन हुनेछ । नयाँ कार्यको संझौता समेत हुने देखिन्छ तर उत्तराद्र्धको समयमा आर्थिक पक्ष कमजोर बन्नेछ । व्यर्थको कार्यमा समय वित्नेछ । टाढाको यात्रा कष्टकर रहने देखिन्छ ।
सिंह – मनमा शान्तिको अनुभूति हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा चासो रहनेछ । साथीभाईसँगको रमाइलो यात्राको अवसर जुट्नेछ । शुभ खबर सुन्न पाइनेछ । विपक्षीहरु पनि मेलमिलापको वातावरणमा आउन बाध्य हुनेछन् ।
कन्या – नयाँ कार्यको नेत्रीत्व गर्न पाइनेछ । मान सम्मान मिल्नेछ । कुटुम्बको सहायताले कार्य बन्नेछन् । मांगलिक कार्यको निम्तो पाइनेछ । धन सञ्चय गर्ने वातावरण बन्नेछ । व्यवहारिक पक्ष सबल रहनेछ ।
तुला – मध्यान्ह अघि अनावश्यक स्थानमा लगानि गरिनेछ । आफन्तजन टाडिनेछन् । मध्यान्ह पछि व्यवसायबाट सुख सन्तोष मिल्ने देखिन्छ । विशिष्ट व्यक्तिसँग मित्रताको बन्धन गाँसिनेछ । सृजनात्मक कार्यमा ध्यान जानेछ ।
बृश्चिक – दिनको पूर्वाद्र्धका समयमा अकस्मिक धन लाभ, सृजनात्मकताको कदर हुने समय रहेको छ । मध्यान्ह पछि शारीरिक कमजोरीले कार्य गर्न सकिने छैन । नयाँ कार्य एवं लगानिले तनाब मात्र थपिनेछ ।
धनु – वहान सुख मिल्नेछ । सान्दर्भिक कार्यको उठानले धेरैको साथ मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट मनग्य नाफा कमाउन सकिनेछ । पढाइमा जोड दिँदा उच्च स्थान मिल्नेछ । आम्दानिका नयाँ बाटाहरु फेला पर्नेछन् ।
मकर – सामाजिक पदप्रतिष्ठा मिल्नेछ । सामान्य मिहिनेतले नै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । मान्यजनसँग सहकार्य गर्ने अवसर जुट्नेछ । परिश्रमको उचित प्रतिफल मिल्दा हौसला थपिनेछ । कार्य क्षेत्र प्रति समर्पित भइनेछ ।
कुम्भ – गोपनियता बाहिरिँदा समस्या सृजना हुनेछ । सामान्य कामलाई पनि धेरै प्रयास गर्नुपर्नेछ । तर मध्यान्ह पछि भने आर्थिक पक्षमा बढोत्तरी भएर जानेछ । टाढिएका आफन्तजनसँगको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।
मीन – प्रेम प्रसङ्ग चल्नेछ । मनोरञ्जनात्मक कार्यमा सहभागी भइनेछ । तर मध्यान्ह पछि भने अरुको भर विश्वासमा बस्दा महत्वपूर्ण अवसर गुम्नेछ । शारीरिक आलस्यताले सताउनेछ । चिन्ता एवं पीरले काम गर्न सकिने छैन ।